Daanyeer: Qoraa, Madbacad, Ganacsade | Martech Zone
Arbacada, February 13, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Diyaargarowga wareysiga aan la yeelanay Guy Kawasaki, waxaan soo iibsaday nuqul ka mid ah APE: Qoraa, Madbacad, Ganacsade-Sida Loo Daabaco Buug.
Waxaan aqriyay buugaagta Guy Kawasaki intooda badan waxaanan taageersanahay in mudo ah (hubso inaad lasocoto wareysiga markii ugu horeysay ee uu igu soo qoro story sheeko qosol badan!) Buuggan aad ayuu uga duwan yahay, in kastoo ... uu yahay buug tilmaam tallaabo-tallaabo ah oo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo is-daabaco ebookgaaga.
Qorayaasha Guy Kawasaki iyo Shawn Welch ayaa bilaabaya APE: Qoraa, Madbacad, Ganacsade iyadoo sheekada dhabta ah ee ku saabsan Guy ee jahwareerka ka haysata helitaanka daabicitaankiisii ​​ugu dambeeyay ee elektaroonig ah oo loo qaybiyo iibsi ballaaran oo shirkad ah. Buuggu wuxuu markaa ku dhex marayaa dhammaan caqabadaha ebook-ka laga soo bilaabo qaabab, qalab, u qaybinta suuqgeynta Way ka adagtahay sidaad moodeysid (illaa buuggan!).
Buuggu wuxuu faahfaahinayaa dhammaan hababka la xaqiijiyay ee loogu talagalay abuurista ebook-kaaga, illaa iyo shaashadaha qalabka la adeegsado, bogagga laga faa'iideysto, iyo goobaha suuq-geynta. Runtii waan layaabay faahfaahinta oo dhan. Runtii waa tilmaam tilmaam tallaabo-tallaabo ah oo loogu talagalay qof kasta inuu iskiis u daabaco.
Aad ayaan ula dhacay oo waxaan iibsaday oo aan u qaybiyey 3 nuqul oo kale… Jenn iyo Marty kuwaas oo labadoodaba ku shaqeynaya buugaagtooda illaa iyo Nathan, naqshadeeyahayaga, kaas oo gacan ka geysan doona naqshadeynta garaafka.
Maxaad Buug u daabacanaysaa?
Waxaan markii ugu horreysay la dhacnay fursadaha is-daabacaadda markii aan wareysannay Jim Kukral. Jim wuxuu noo tilmaamay in qalooca dalabka buugaagta buugaagta uu aad uga dhakhso badan yahay wax soo saarka dhabta ah ee ebook-yada. Tani waa waqti aan caadi aheyn shaqsiyaadka ama shirkadaha si ay u dhisaan kalsooni iyo amar iyagoo daabacaya ebook.
Haddii aad heshay wax la yaab leh oo la yiraahdo… tani waa fursaddaada inaad daabacdo oo aad la wadaagto!
Tags: runtiiqoraagabuugga e-buuggaeBookganacsadahaGuy Kawasakidaabacaanpublisheris-daabacid
Febraayo 14, 2013 saacadu markay tahay 10: 44 AM
Miyuu ku galaa qorista buugga ghost? Miyuu qorshe u leeyahay dadka aan haysan waqtiga (ama laga yaabee kartida) inay wax qoraan?
Feb 14, 2013 markay ahayd 3:24 PM
Nabadeey @daveyoung: disqus, waxaa jira tilmaamo qoraal ah oo kujira buuga. Waxaan u maleynayaa in Guy ay u badan tahay inuu yahay qofka ugu horeeya ee kuu sheegaya in wada-qoraagu uu yahay talaabo aad u wanaagsan haddii aadan haysan waqti iyo karti toona. Waxaan ku lahaa wada-qoraa buuggayga wax walbana way fududaysay… asal ahaan buuggu wuxuu ahaa fikirradayda laakiin Chantelle ayaa abaabushay waxayna ku haysay mashruuca yoolka.